Snowflake Weißröckchen - manotsi uye mashoko kunyorera
Snowflake White Skirt - manotsi uye mashoko
Snowflake White Skirt - Rugwaro
Nzira yekuimbira zvipfeko zveKrisimasi pamba nemhuri nevana, kana kuchikoro uye kuchikoro, haisi yakwegura. Kubva pane ye18 chete. Makore ezana anoimba mumhuri uye kubva chete ku19. Mazana emakore anoziva mumwe muGermany nziyo dzinobva kune dzimwe nyika.
Sheet music and text Snowflake White Skirt
Kuimba nekugadzira mimhanzi pamwechete nekukomberedza Krisimasi kunoumba mamiriro akanaka, anokosha uye akasiyana. Kwete vana chete vezera rose vanonakidzwa nazvo. Kana kazhinji nziyo dzichidzokidzwa kana dzakanzwika panguva ino, zviri nani zvinyorwa zvigere. Kana iwe ukakwanisa kutamba chiridzwa, iwe unogona kutamba kuwirirana.
Nokutsvaga pamufananidzo, pepa ravaraidza nemanyoro uye zvinyorwa zveKrisimasi carol zvinotanga pdf format
Snowflake, White Skirt,
iwe unopikisa rini?
Iwe unorarama mumakore,
nzira yako iri kure.
iwe unofadza nyeredzi,
pende maruva nemashizha,
isu tinoda iwe
Snowflake, iwe unotifukidza
ipapo vanovata vakachengeteka
uya kwatiri mumupata.
Ipapo tinovaka mucheche wechando
uye kukanda ibhora.
Noten von Weihnachtslied Snowflake Open Weißröckchen as graphic file
Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesukana iwe uri kutsvaga mamwe manotsi uye mazwi echiremba chinyorwa. Isu tinofara kuwedzera mamwe manotsi nemashoko ekunyorwa kwedu kwezvinyorwa zveimbi dzevana. Kugadzirwa kwemashoko ane mapeji akakodzera-mavara ane mazamu akaoma, asi kana zvichidiwa tinoda kuedza.
Gore negore - manotsi uye kunyora
Zvose zvangu ducklings - manotsi uye zvinyorwa
Shiri dzose dziripo kare - manotsi uye kunyorera
Pamusi weKrisimasi mwenje uri kupisa - manotsi ...
Pamuti kune cuckoo zvakanyorwa - uye kunyora
Hama dzinouya kuzotamba neni - manyorero uye kunyora
Mwedzi wakamuka - nyora uye kunyorera
Murume muduku amire mumasango - manotsi uye mavara
Imwe shiri yaida kugadzira chikwata-nyora uye kunyora
Kunakidzwa Krisimasi kwose kwose - manotsi uye kunyora
Fox, iwe wakba mhando - manotsi uye unyorera